आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश घोषणा, कति पाउने भए शेयरधनीले ? - सिम्रिक खबर
आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश घोषणा, कति पाउने भए शेयरधनीले ?
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कमाएको नाफाबाट १२ दशमलव ६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तको असोज २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६३ प्रपतिशत नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यो प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् । ९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७३ करोड १९ लाख पुग्नेछ । अघिल्लो आवको मुनाफाबाट कम्पनीले ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।